I-typekit ngoku ibizwa ngokuba zii-Adobe Fonts kwaye iya ngqo kwi-Adobe CC | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-typekit ngoku zii-Adobe Fonts kunye nenxalenye ye-Creative Cloud
I-Typekit yinkonzo yefonti eyayifumana ngo-2011 inkampani yeAdobe. Kungoku xa athe wabhengeza ukuba iTypekit ngoku ibizwa ngokuba zii-Adobe Fonts kwaye iya kuba ngaphezulu kwe-14.000 yamagama ukuzibeka njengobutyebi obubalulekileyo kuzo zonke iintlobo zeengcali.
Kwakhona, Iifonti zeAdobe ziba yinxalenye yeLifu lokuDala. Oko kukuthi, ukuba unesicwangciso esinye sokufaka isicelo, ungasebenzisa ngaphezu kwe-14.000 yamagama ukwenza kucace ukuba ubheja kumgangatho kunye nochwethezo lobuchwephesha.
Kwaye kunjalo ukuba unayo ingxelo yasimahla Ukusuka kwilifu lokuYila, ungasebenzisa ingqokelela esisiseko yeeleta ezivela kwiifonti ze-Adobe. Oko kukuthi, uneakhawunti yokusebenzisa iAdobe XD, sele simahla iinyanga ezimbalwa, kwaye ungonwabela zonke iifonti ezisisiseko ezivela kwiifonti zeAdobe.
Awuhlali nje kule ntengiso enxulumene neefonti zeAdobe. Kodwa uthotho lweempawu ezintsha zikwabandakanyiwe kulungelelwaniso. Loo mithombo yiya efini. Oko kukuthi, ukuba umsebenzisi uyayisebenzisa, unokuyisebenzisa naphina. Ngamanye amagama, yonke imithombo yelayibrari iyafumaneka ukuze isetyenziswe kwiwebhu nakwidesktop.
Injongo yile ukutyebisa amava eLifu lokuDala yokufikelela kukhetho olukhulu lweendidi zochwethezo, inkonzo yokuchwetheza ngokungafaniyo nenye, kwaye yintoni indibaniselwano engenamthungo neCC.
Nangona inani lemithombo yolwazi liza kufakwa ngokuthe chu. Okokuqala iya kuba malunga nama-3.000 amafonti amatsha kwilayibrari abaya kubambelela kuyo ngokuhamba kwexesha. I-adobe eqhubeka ikhula ukuze ihlale idityanisiwe njengenkampani ebalulekileyo yokuyila kuso nasiphi na isixhobo. Kungekudala nje emva kokwazi ukuba yintoni entsha I-Adobe CC ebalulekileyo kunye nezinye iinkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-typekit ngoku zii-Adobe Fonts kunye nenxalenye ye-Creative Cloud
Utata we-Intanethi ufuna ukugcina iwebhu nge 'Magna Carta'
Iikhamera ezi-4 zeMillenium zeefoto zeLake Tahoe iminyaka eli-1.000 XNUMX